Hadalkii gaabnaa ee uu soo jeediyay shir guddoonka kadib, waxaa hadalkii qaatay madaxa ururka SSUF Xamdi Cali oo ka warbixisay waxqabadkii uu ururka soo qabtay iyo himilooyinka uu tiigsanayo mustaqbalka dhow. “ulajeeddada daladda ururka SSUF waa inuu xoogga saaro dhinaca waxbarashada, is dhexgalka hufan ee bulshada swiidishka, ka hortagga maandooriyayaasha, la dagaalanka midabtakoorka iyo nashaad u gaar ah gabdhaha” ayay tiri Xamdi Cali oo iyadu khudbaddeeda ku soo jeedinaysay afka iswiidishka.
Hayaan Cabdisalaan Ismaaciil oo ka socday xafiiska suuqa shaqada ee xaafadda Rinkeby ayaa soo gudbiyay warbixin ku saabsan fursadaha shaqada iyo waddooyinka loo marayo marka la dalbanayo shaqada. “waxaan ka mid ahay shaqaalaha ugu da’da yar ee ka shaqeeya xafiiska shaqada Rinkeby, waxaan la kulmaa dhibaatooyin badan oo shisheeyaha ka haysata xagga shaqada, intooda badan ma yaqaaniin qaabka loo maro dalbashada shaqada” ayuu yiri Hayaan oo ka baxay Jaamacadda Stockholm bartayna cilmiga siyaasadda. Warbixintii koobnayd Hayaan waxaa lagu soo gabagabeeyay su’aalo laga weydiiyay suuqa shaqada iyagoo ay weydiiyeen xubnihii halkaas isugu yimid.
Wuxuu Caliyare tilmaamay ahmiyadda ay leedahay in la helo dhalinyaro firfircoon oo ilaashada dhaqankooda, isla mar ahaantaasna ka faa’iidaysta fursadaha ka jira dalkaan aynu ku noolnahay. Dhinaca kale, wuxuu Caliyare ku nuuxnuuxsaday in laga feejignaado dhammaan asbaabaha keena inay caruurta qaadaan waddo aan wanaagsanayn.
Ciise Dholowaa oo ka yimid dalka Australia ayaa ka mid ahaa martidii lagu casumay shirkii ururka midowga dhalinyarada soomaaliyeed SSUF, isagoo hadallo qiimo badan ka soo jeediyay goobtii shirka. Ciise Dholowaa oo maalmo kahor ka yimid Waqooyiga Ameerika ayaa muujiyay dareenkiisa sida uu ugu farxay kulankii dhalinta soomaaliyeed ay ku yeesheen Kista. “ururka SSUF waan uga mahad celinayaa inay igu marti qaadeen shirkaan qiimaha badan, waxqabadkoodana waxay i gelisay farxad aad u weyn” ayuu yiri Ciise Dholowaa oo ka waramay guud ahaan ururadii uu maalmo kahor kula kulmay magaalooyinka Toronto ee Canada iyo Minneapolis ee dalka USA.
Ciise Dholowaa ayaa dadkii goobtii shirka joogay uga waramay howlihii bani’aadminimo ee uu ku caawiyay caruurtii soomaaliyeed, waxaana hadalladiisa ka mid ahaa “howlihii ugu wanaagsanaa ee aan qabto waxay ahaayeen caruurtii tabaalaysnaa ee u baahnaa qalliinka degdegga ah ugu qaaday dalka Australia, caruurtaasoo ka badnaa 20 qof”, ayuu yiri Ciise Dholowaa, wuxuuna intaas raaciyay “waxaan dalka Australia degganaa 20 sanno, baaritaanno iyo qoraallo badan ayaan ka sameeyay soomaalida ku nool qurbaha, waxaan ku faraxsanahay inay soomaalida ka sii yaraanayso qabyaaladdii qurisay qarankoodii” ayuu yiri Ciise Dholowaa oo naxdin iyo walbahaar weyn ay ku beertay gacan-ka-hadalkii ay dorraad isu gaysteen xil-dhibaannadii baarlamaanka DFKMG. “waxaa saakay i soo wacday xaaskayga oo u dhalatay dalka Australia, waxay i weydiisay kadib markay taleefishinka ka aragtay. maxay kuraasta iyo miisaska ugu dagaallamayeen xubnihii baarlamaanka DFKMG” ayuu yiri Ciise Dholowaa oo wejigiisa ay hareereesay murugo markii uu ka waramayay dhacdadaan foosha xun.
Ciise Dholowaa wuxuu ururka SSFU ku waaniyay inay dadaal badan ku bixiyaan sidii ubadkeena soomaaliyeed aan uga badbaadin lahaayeen mukhaadaraadka iyo guud ahaan denbiyada waaweyn. “ururada soomaaliyeed ee aan Canada kulmay waxay ii sheegeen in gobolka Ontario keliya ay xabsiyada ku jiraan soomaali tiradooda kor u dhaaftay 1400 qof, waa tiro aan aad uga naxay” ayuu yiri Dholowaa oo soomaalida Sweden uga digay inay dhalintooda uga digaan inay qaadaan waddadaas oo kale.
Wiil dhalinyaro ah oo xammaasaysan ayaa hadalkii ka qaatay Dholowaa, wuxuuna u sheegay dadweynaha in tirada soomaalida ku jira xabsiyada Sweden aynan dhaafsiisnayn 48 qof “sidaas waxaa ii xaqiijiyay booliiska Stockholm, way habboon tahay haddaynu nahay ururka daladda SSUF ay feejignaadaan si aynan u siyaadin tiradaas” ayuu yiri Abuukaar Caato kana mid ah dhalinyarada firfircoon ee agaasima isboortiga iyo cayaaraha.
Ciise Dholowaa wuxuu dhalinyaradii isugu jiray wiilal iyo gabdho ku baraarujiyay inay ka faa’iidaystaan fursadaha ka jira dalalkaan. “anniga Asutralia waxa ay ii qabteen iima qaban dalkayga, wuxuu i siiyay waxbarasho lacag la’aan ah, degganaansho jeer aan ka qaato jinsiyadda, waxaan idin leeyahay ka faa’iidaysta fursadaha aad haysataan oo ka xorooba qabyaaladda dalkeenii burburiyay” ayuu yiir Dholowaa oo waqtigan xaadirka ah ku mashquulsan diyaarinta Risaaladiisa Phd-ga kuna saabsan Soomaalida ku nool qurbaha.
Waxaa sidoo kale goobtii shirka ka hadlay Maxammed Faarax Xaji Warsame oo macallin ka ah dugsiga hoose/dhexe ee ku yaala Rinkeby Stockholm dalka sweden. Wuxuu Maxammed aad ugu dheeraaday ahmiyadda ay caruurta soomaaliyeed ugu leedahay barashada luqaddooda hooyo. “khibraddayda macallinimo waxaan ka bartay caruurta sida wacan u yaqaana afkooda hooyo waa kuwa sida saxda ah u baran kara luqadaha kale” ayuu yiri Maxammed Faarax, wuxuuna waalidiinta soomaaliyeed kula dardaarmay inay ubadkooda kula sheekeestaan afka soomaaliga, gaar ahaan markay guriga joogaan. “inaad caruurtiina ka caawisaan afkooda hooyo waxay idinka caawinaysaa markaad da’ noqotaan, luqaddaada hooyo waa shakhsiyaddaada” ayuu yiri Maxammed Faarax, isagoo tilmaamay isticmaalka luqadda soomaaliga oo aad ugu yar soomaalida ku nool qurbaha.
Xaaji Faarax ayaa isna ka mid ahaa raggii goobtii shirka ka soo jeediyay hadal gaaban, wuxuuna ka hadlay waajibka waalidka ka saaran caruurtooda, isagoo dhinaca kalena ka digay denbiyada ay caruurta ku mutaystaan ciqaab adag oo caqabad ku noqda mustaqbalkooda xagga shaqada iyo waxbarashadaba. “waxay shaqadaydu tahay inaan caruurta shisheeyaha, gaar ahaan kuwa soomaalida aan ka siiyo talooyin la xiriira falalka denbiyada, waxaadna ogaataan inaanan u shaqaynin booliiska” ayuu yiri Xaaji Faarax.
Hassan Dolek oo isaguna ka socday xisbiga talada dalka haya ee social-ka isla mar ahaantaana ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee maamula xarunta Stockholm ahna guddoomiyaha daladda ururka dhalinyarada ee turkiga ayaa sidoo kale ka hadlay goobtii shirka, isagoo ka hadlay guud ahaan siyaasadda axsaabta ka jira dalka Sweden. “waxaan idinku boorinayaa inaad si firfircoon uga qayb qaadataan siyaasadda dalka, kana muuqataan jaamacadaha iyo xarumaha waxbarashada dalka” ayuu yiri Hassan Dolek oo ammaan ballaaran u soo jeediyay agaasimaha ururka daladda SSUF Ahmed Hassan oo laf-dhabar weyn u ah ururka SSUF, la’aantiisna aan qabsoomayn shirka maanta.